Ithini imbali yelogo kaGoogle? | Abadali be-Intanethi
I-logo luphawu lwesazisi somfanekiso wenkampani yeempawu ezininzi., kwaye kuyimfuneko ukuba uyilo lwayo lumele kwaye lucaciswe ngononophelo olukhulu.
Kwisithuba sanamhlanje, siza kuthetha malunga Imbali yelogo kagoogle. Singathetha ngoGoogle, njengenye yezona mpawu zibalulekileyo kwindawo yangoku, kuba sinayo kwimihla yethu yemihla ngemihla, ngokusebenzisa imisebenzi emininzi esinika yona kwizixhobo zethu, zombini iikhompyuter kunye neeselfowuni.
Akuyena wonke umntu owaziyo ngembali emva kwe-logo ye-Google, apho imvelaphi yayo ivela khona, ingaba ifumene utshintsho oluninzi, njl. Yiyo loo nto ingakhe ibeninzi kakhulu, sizijulele ngaphakathi ukukhula kunye nokuvela kwenye yeenkampani ezinkulu kwihlabathi.
1 Yintoni iGoogle?
2 Imbali yelogo kaGoogle
3 Imibala kaGoogle
4 Yintoni iiDoodles?
UGoogle ayisiyonjini yokukhangela nje, kodwa iqulethe okuninzi okujikeleze kuyo. Yenye ye Iinkampani zaseUnited States ezaziwa kakhulu kwihlabathi liphela, kwaye ikhethekileyo kwiinkonzo zekhompyuter kunye neemveliso ezinxulumene ne-Intanethi.
Igama likaGoogle lisuka kwimathematika ebizwa ngokuthi "Googol" efuzisela i-10 ephakanyiswe kwi-100, yathiywa ngolu hlobo ngabadali bayo iBrin kunye nePage xa ​​baqala ukuphuhlisa le njini yokukhangela.
Imbali yelogo kaGoogle
Ngonyaka we-1997, into ethathwa njengoyilo lokuqala lwelogo yeGoogle yavela, ilogo eyenziwe nguBrin ngokwakhe, ngenkqubo yokuhlela umfanekiso.
Njengoko sibona i-logo yelo xesha yayingenanto edlulayo, ikhumbuza ngakumbi oonobumba esinokubenza nge-WordArt.
Ngaphantsi konyaka kamva, ngo-1998, uhlengahlengiso lokuqala lwelogo lwenziwa, uyilo apho igama uphawu lunokubonwa ngendlela efundeka ngakumbi kwaye apho indibaniselwano yombala yayisele ikhona esikwaziyo namhlanje.
Phakathi kuka-1998 no-1999, ilogo yongezwa a isiphumo sesithunzi kunye nophawu lwesikhuzo ekupheleni kwegama, kunye nokutshintsha kombala. Bathi ngale logo bafuna ukulinganisa i-internet portal Yahoo!.
Kulo nyaka uphelileyo, ngo-1999, bagqiba ekubeni banike ilogo imbonakalo yobungcali ngakumbi. Olu tshintsho lweza kunye ne umyili uRuth Kedare. Ingabonwa ukuba uyilo lusekelwe kwi-typography kunye ne-serifs kunye nokuhlanganiswa kombala ofanayo kunye ne-logo yangaphambili.
Le logo ihlala ixesha elide njengomfanekiso wenkampani yokukhangela, ukusuka ekudalweni kwayo ngo-1999, ukuya kutsho ngo-2010.
Kulo nyaka ka-2010, ilogo ingena a ukuhlengahlengisa okuncinci kunye nokulula, kwaye oko kukuba uhlobo lochwethezo lunobungqingqwa kunye ne-shading efihlakeleyo.
Kwiminyaka emithathu kamva, ngo-2013, i isiphumo sesithunzi siyanyamalala ebonisa ilogo elula enesitayile esincinci.
Ngonyaka 2014, UGoogle ubonisa uyilo olubandakanya zonke iimveliso zayo kunye neenkonzo. Isiphakamiso soyilo olusekelwe kwiimilo zejometri. UGoogle uthathe umngcipheko kwaye watshintsha uhlobo lwayo lokubhala lwaya kwi-sans serif, i-typeface engenaserif. Injongo yolu tshintsho kukukwazi ukuziqhelanisa neenkqubo zeefowuni eziphathwayo.
Ukongeza kolu tshintsho kwilogo, uGoogle wazisa i icon enendima ebaluleke kakhulu kwisicelo sayo kwiifowuni eziphathwayo.
Asikwazi ukuthetha ngelogo yeGoogle ngaphandle kokubhekisa kusetyenziso lombala; abo imibala elula kodwa enika umdla.
Ukusetyenziswa kwale mibala emine, eluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu, oluhlaza kunye nophuzi, kwakungesona sigqibo esingalindelekanga, kodwa ukhetho lwakhe luphefumlelwe ngumdlalo wokwakha weLego.
Ibali lihamba ukuba i-computer yokuqala ye-Brin kunye nePhepha esetyenziselwa ukusebenza kwisiphequluli sabo yakhiwe ngeziqwenga ze-Lego kwimibala emine yelogo.
Enye ye ukwahluka kwelogo ngokombala, kubonakala xa isiganeko esibuhlungu sisenzeka okanye inyani ebalulekileyo kwimbali ikhunjulwa. Ayinakuvela kuphela kwinguqulo ye-monochrome, kodwa iphinda ilungelelanise abalinganiswa bayo kubandakanywa imifanekiso yomcimbi oza kukhunjulwa.
Asinakuthetha ngoGoogle ngaphandle kokubhekisa kwindumasi yayo Imizobo, eyothusayo ngawo wonke umnyhadala obalulekileyo emhlabeni. Kukho phantse ama-2 eeDoodles eziziswe kwihlabathi liphela, ezinye zazo zisetyenziswa kuphela kwilizwe elithile ngenxa yomxholo wazo.
Umzekelo, le siyibona ngezantsi isikhuthaza ukuba sigonywe kwaye sisebenzise imaski ukusindisa ubomi.
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 sele idlulile ukusukela ngo-1997 xa sadibana nelogo yokuqala kaGoogle, ethe yavela yaba yenye yeebrendi eziphambili namhlanje.
Idlulile kwi-redesigns ezisixhenxe, ide ifikelele kumfanekiso olula, ofihlakeleyo kunye nosondeleyo wenkampani, ukongeza kwizinto ezininzi ezihlukeneyo.
Kodwa ayizizo zonke iindaba ezilungileyo, Kukwakho ukugxekwa kwaye kuye kwathiwa isimboli se-G esimele uGoogle asihambelani, kwaye kwakungekho ijometri, ngoko ke inkampani ayizange idale ngokuchanekileyo umfanekiso wenkampani omele yona.
Ezi zigxeko zavalwa umlomo ziingcali ezohlukeneyo ezithi zinjalo izigqibo eziqhutywa ngabom ngokupheleleyo, ekubeni, xa ulungelelanisa i-logo kwigridi yokwakha, unobumba u-G unika imvakalelo ye-circumference epheleleyo, nangona kungenjalo.
Ngaphandle kothandabuza, Yenye yeelogo ezaziwayo ehlabathini, njengoko ijongwa zizigidi zabasebenzisi yonke imihla. UGoogle uyayazi indlela yokuziqhelanisa notshintsho.
Ilogo kaGoogle isekwe kwimbali yayo yonke iingongoma ezine eziphambili kuyilo lwayo, ukulula, ukusetyenziswa kombala, ukucaca kunye nokuguquguquka. Iinkalo ezine ezihlonitshiweyo kuhlengahlengiso ngalunye.
Ngaba uGoogle uza kuyitshintsha ilogo yakhe kwakhona? Asinakuphendula ngokuqinisekileyo lo mbuzo, kodwa xa siqwalasela imvelaphi yakhe, asinakuphendula ikhulu leepesenti elinguhayi. Isazisi esibonakalayo samva nje uGoogle anaso, esi sanamhlanje, simele ukuba yintoni iGoogle kunye nokuvela kwayo, ayisiyonjini yokukhangela, kodwa ilawula iinkqubo ezahlukeneyo zokusebenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ithini imbali yelogo kaGoogle?